पति जेल परेपछि शिल्पा शेट्टी सुपर डान्सरबाट गायब, को आउला यो हप्ता ?
भारतीय टेलिभिजनको हिट डान्स रियालिटी शो सुपर डान्सर च्याप्टर ४ मा एक निर्णायक शिल्पा शेट्टी देखिन छोडेकी छन् ।
पति राज कुन्द्रा पोर्नोग्राफी केसमा फसेपछि शिल्पा शोमा देखिन छाडेकी हुन् । उनले शोमा विशेष शैली अपनाएर दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिने गरेकी थिइन् ।
शोका निर्माताहरू शिल्पाको स्थानमा सेलेब्रिटीहरूलाई बोलाइरहेका छन् ।
अब नयाँ एपिसोडमा सोनाली बेन्द्रे र मौसमी चटर्जीलाई गेस्ट जजका रूपमा बोलाउने तयारी गरिएको बताइएको छ ।
यी दुवै अभिनेत्रीले आआफ्नो फिल्मको सुपरहिट गीतमा प्रस्तुति दिनेछन् । उनीहरूले फिल्मी करीयरका रमाइला कुरा पनि सुनाउनेछन् ।
'पृथ्वीराज'मा सञ्जयको भन्दा १२ गुणा बढी तलब लिए अक्षयले, कसको कति ?
चलचित्र ‘पृथ्वीराज’का कारण पछिल्ला दिनहरूमा अक्षय कुमार चर्चामा छन् । उनले यस चलचित्रका लागि सञ्जय दत्तले भन्दा १२ गुणा बढी रकम लिएको बताइएको छ । चलचित्रमा अक्षय र सञ्जयका साथमा मानुषी छ...
यी सेलिब्रेटी : कसले कहाँबाट गर्दैछन् मतदान ?
शुक्रवार स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा आम सर्वसाधारणले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै मतदान गर्दैछन् । सर्वसाधारण मात्र होइन्, चलचित्र तथा सांगीतिक क्षेत्रका थुप्रै सेलिब्रेटीहरू पनि शुक्रवार आफ्नो मतदान ग...
फेरि चलमलाउँदै छ निर्वाचनमा सुस्ताएको सांगीतिक बजार
स्थानीय तह निर्वाचनको माहोलले ठप्पप्रायः सांगीतिक बजार फेरि चलमलाउन थालेको छ । निर्वाचनको माहोलका कारण झण्डै दुई साता सांगीतिक बजार ठप्प थियो । निर्वाचन मितिको एक साता अघिदेखि एक साता पछिसम्म युट्यु...
दोस्रो राष्ट्रिय ब्रान्ड म्युजिक अवार्ड –२०७८ हुँदै
ब्रान्डरूट इन्टरटेन्मेन्ट प्रालि काठमाडौंले दोस्रो राष्ट्रिय ब्रान्ड म्युजिक अवार्ड गर्ने भएको छ । अघिल्लो वर्ष भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको अवार्ड कार्यक्रम असार ११ गते राष्ट्रिय नाचघर जमलमा हुने भएको हो ।&n...
'भूल भुलैया २' फिल्म समीक्षा : टाइमपासका लागि उपयुक्त
हिन्दी भाषामा बन्ने हरर फिल्महरूले चिकित्साविज्ञानको कुरा नगरेकै राम्रो । प्रियदर्शनले बनाएको भूल भुलैया मलयाली भाषाको मणिचित्रथाजुको रिमेक थियो । त्यसमा मञ्जुलिका नाम गरेकी भूतनीको कथा चलुन्जेल दर्शकक...
नेत्र अर्यालको ‘फोटो मायाको’ सार्वजनिक
गीतकार नेत्र अर्यालको प्रस्तुतिमा ‘फोटो मायाको’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । प्रेम विरहको यस गीतमा सुनिता बुढा क्षेत्री र सन्तोष क्षेत्रीले स्वर दिएका छन् । नेत्रको शब्द एवं संगीत रह...